Shiinaha FOB Soosaarayaasha Degdega ah iyo alaableyda | Liming Bio
Tallaabada 'StrongStep'®FOB Rapid Test Strip (Feces) waa tallaal degdeg ah oo muuqaal ah oo loogu talagalay soo-saarista tayada ee helitaanka haemoglobin bini-aadam ee tijaabooyinka saxaro ee aadanaha. Qalabkan waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo gargaar ahaan baaritaanka cudurada caloosha hoose ee hooseeya (gi).
Kansarka malawadka waa mid ka mid ah kansarada ugu badan ee la ogaado waana sababta ugu weyn ee keenta dhimashada kansarka Mareykanka. Baaritaanka kansarka mindhicirka malawadka waxay u badan tahay inay kordhiso ogaanshaha kansarka marxaladda hore, sidaas darteed waxay yareysaa dhimashada.
Tijaabooyin hore oo ganacsi ahaan loo heli jiray 'FOB' ayaa isticmaalay baaritaanka 'guaiac test', oo u baahan xaddidaad cunno gaar ah si loo yareeyo natiijooyinka been abuurka ah iyo kuwa xun. The FOB Rapid Test Strip (Feces) waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu ogaado hemoglobin bini'aadam ah shaybaarada saxarada iyadoo la adeegsanayo hababka Immunochemical, taas oo hagaajisay qeexitaanka ogaanshaha caloosha hoose. cilado, oo ay ku jiraan kansarka mindhicirka iyo adenomas.
Mashiinka 'FOB Rapid Test Strip' (Feces) waxaa loogu talagalay in lagu ogaado hemoglobin bini'aadam iyadoo loo marayo fasiraadda muuqaalka ah ee horumarinta midabka ee ku taal qeybta gudaha. Xuubka waxaa lagu dhaqdhaqaaqay unugyada anti-bini-aadamka ee difaaca jirka ee gobolka imtixaanka. Inta lagu jiro baaritaanka, muunadda waxaa loo oggol yahay inay ku falceliso unugyada anti-bini-aadamka anti-bini-aadanka ee isku xira isku-xidhka dahabiga, kuwaas oo lagu soo duubay suufka tijaabada. Isku darku ka dib wuxuu ku dul dhaqaajiyaa xuubka ficil dabacsan, oo wuxuu la falgalaa reagent-yada xuubka. Haddii ay jiri lahaayeen hemoglobin bini'aadam ah oo ku filan tijaabooyinka, koox midab leh ayaa ka soo bixi doonta gobolka baaritaanka xuubka. Jiritaanka kooxdan midabka leh waxay muujineysaa natiijo wax ku ool ah, halka maqnaashaheeda ay muujineyso natiijo xun. U muuqashada koox midab leh oo ku taal aagga koontaroolka ayaa u adeegta sidii nidaam xakameyn ah. Tani waxay muujineysaa in mugga saxa ah ee tijaabada lagu daray iyo xuubka xuubka oo dhacay.
Professional Loogu talagalay xirfadle ku ogaanshaha fitamiinada isticmaalka kaliya.
Use Ha isticmaalin ka dib taariikhda uu dhacayo ee ku qoran baakadka. Ha isticmaalin baaritaanka haddii kiishka ay ku qoran tahay waxyeello uu soo gaadhay. Dib ha u isticmaalin imtixaannada.
Kit Qalabkan waxaa ku jira alaab asal ahaan ka soo jeeda xoolaha. Aqoonta la xaqiijiyay ee asalka iyo / ama xaalada nadaafadeed ee xayawaanka ayaan gabi ahaanba damaanad qaadi karin maqnaanshaha wakiilada cudurada faafa. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa in alaabtan loo daaweeyo inay yihiin kuwo faafin kara, laguna maareeyo iyadoo la ilaalinayo taxaddarrada caadiga ah ee nabadgelyada (tusaale, ha cunin ama ha u neefsan).
Ka fogow faddarada iskutallaabta ee tijaabooyinka adigoo u isticmaalaya weel ururinta muunad cusub shaybaar kasta oo la helo.
Si taxaddar leh u akhri nidaamka oo dhan ka hor baaritaanka.
Eat Ha cunin, wax ha ku cabbin, sigaarna ha ku cabin aag kasta oo muunado iyo xirmooyin lagu qaato. U qaado dhammaan tijaabooyinka sida haddii ay ku jiraan walxaha faafa. U fiirso taxaddarrada la dejiyey ee ka hortagga halista maaddooyinka noolaha inta lagu guda jiro howsha oo raac hannaanka caadiga ah ee saxa habboon ee tijaabada. Xidho dharka difaaca sida jaakadaha shaybaarka, galoofisyada la tuuri karo iyo ilaalinta indhaha marka tijaabooyinka la qaado.
Er Keydinta shaandhada shaandhada waxay ka kooban tahay sodium azide, oo ku falcelin karta macdanta `` lead '' ama macdanta naxaasta si ay u sameysato astaamo bir ah oo qarxa. Markaad tuuraysid keydka shaandhada ama shay-baarka la soo saaray, had iyo jeer ku daadi biyo fara badan si looga hortago aaladda azide.
Ha is dhaafsan ama ha ku qasin reagendooyinka ka soo baxa saamilo kala duwan.
■ Qoyaanka iyo heerkulka ayaa saameyn xun ku yeelan kara natiijooyinka.
Materials Qalabka baaritaanka ee la isticmaalay waa in la tuuraa iyadoo la raacayo qawaaniinta deegaanka.
Hore: Trichomonas siilka & Candida
Xiga: Xalka wasakhaynta fungaaga
Tijaabada Degdega ah ee Fob
Qalabka Tijaabada Degdega ah ee Fob
H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Qalabka Coronavirus Antigen Test,